Laporta oo shuruud ku xiray sii joogitaanka Koeman ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 15 Sebt 2021. Kaddib guukdarradii xanuunka badneyd ee Barcelona ka soo gaartay kooxda Bayern Munich, madaxweynaha Blaugrana ee Joan Laporta ayaan ka bixin garoonka Camp Nou, ilaa iyo muddo 3 saacadood ah kaddib dhamaadkii ciyaarta.
Ilo wareedyo reer Catalonia ah ayaa sheegay in xiisaddu ay gaartay heerkii ugu sarreeyay sababo la xiriira guushii ceebta aheyd ee soo gaartay Barcelona, maadaama qaab ciyaareedka uu aad uga fogaa sida la filayay.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia, Joan Laporta hadda kuma fikirayo inuu shaqada ka eryo tababare Ronald Koeman, gaar ahaan qaabkii uu u maanay maalmo kahor ciyaarta.
Laakiin madaxweynaha Barcelona ayaa fursad siin doona Koeman saddexda kulan ee soo socota si uu wax uga beddelo qorshaha iyo qaab ciyaareedka kooxda ee garoonka dhexdiisa, wuxuuna kaga bilaaban doonaa kulanka Granada, waxay la ciyaari doonaan khamiista Cadiz, kaddib waxaa u xigi doona Levante.
Saddexdan kulan ayaa muhiim u noqon doona go’aaminta mustaqbalka Koeman ee Blaugrana marxaladda soo socota, tababaraha reer Holland ayaa durba dhexda ka galay waqti adag, sababa la xiriira in Laporta uu ka naxay qaabka ay kooxda u ciyaareeyso.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Liverpool iyo AC Milan ee tartanka Champions League oo la shaaciyey